Khasaare lagu qiyaasay $130 milyan oo ka dhashay maqnaanshaha adeega internet-ka ee koonfurta iyo bartmaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKhasaare lagu qiyaasay $130 milyan oo ka dhashay maqnaanshaha adeega internet-ka ee koonfurta iyo bartmaha Soomaaliya
Khasaare lagu qiyaasay $130 milyan oo ka dhashay maqnaanshaha adeega internet-ka ee koonfurta iyo bartmaha Soomaaliya
Khasaare lagu qiyaasay $130 milyan oo ka dhashay maqnaanshaha adeega internet-ka ee koonfurta iyo bartmaha Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa shalay oo Axad ahayd walaac ka muujisay la’aanta adeega internet-ka, iyada oo sheegtay in halkii maalinba qiyaastii $10 milyan oo doolar oo khasaaro ah ay ka dhalatay khad la’aanta internet-ka.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyada Soomaaliya Engineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa warbaahinta u sheegay in la’aanta adeega Internet-ka ee ku timid koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya uu ka dhashay khasaaro maaliyadeed.
“Cel celis ahaan khasaaraha ka dhashay la’aanta adeega Internet-ka waa $10 milyan oo doolar halkii maalinba. Waxaanu khasaarnay $130 milyan intii lagu guda jiray labadii asbuuc ee lasoo dhaafay kadib markii la waayay adeegyadii kuwaas oo qeyb ka ahaa nolosha dadkayaga,” Cabdi Canshuur ayaa sidaa yiri.
Wasiirka ayaa sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii dib loogu soo celin lahaa adeega internet-ka sida ugu macquulsan oo ugu dhow.
Labadii asbuuc ee lasoo dhaafay, internet la’aanta ayaa saameysay dhammaan gobolada Soomaaliya ee kuyaala koonfurta iyo bartamaha oo ay kamidtahay caasimada Muqdisho.
Warbaahinta, ganacsatada, iyo haayadaha dowladda ayaa wajahay dhibbaatooyin ku saabsan howlfulinta shaqo maalmeedkoodii internet la’aan darteed.
February 7, 2017 Labo madfac oo ku dhacay meel u dhow goobta doorashada ee Muqdisho iyadoo ay soo aadantahay doorashada madaxweynaha Soomaaliya
September 11, 2017 Ugu yaraan 10 qof oo lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Beled Xaawo
August 24, 2017 Tirada dhimashada dadka ku sumoobay biyo ay ka cabeen ceel biyood kuyaala gobolka Bari oo gaartay ilaa 10 qof
Ciidamada Ciraaq oo si buuxda magaalada Mowsil uga xoreeyay maleeshiyada Daacish
Former Somali PM Mohamed Ali Samatar laid to rest in Mogadishu
Mogadishu-(Puntland Mirror) The body of former Somali Prime Minister, General Mohamed Ali Samatar was Thursday laid to rest at the headquarters of Somali defence ministry in the capital Mogadishu. The late Samatar was worked as [...]
Taliyaha cusub ee AMISOM oo xafiiska la wareegay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyaha cusub ee howlgalka Midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya Janaraal Cusmaan Nuur Subagle ayaa si rasmiya xilka u la wareegay, isaga oo badali doona Janaraal Jonathan Rono. Janaraal Subagle ayaa shalay yimid caasimada [...]
Madaxweynaha dowlada Puntland oo dhagax-dhigay xarun cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Axad ah dhagax-dhigay dhisme cusub oo ay yeelan doonto wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland. Munaasabada dhagax-dhiga ayaa waxaa madaxweynaha ku waheliyay wasiirka [...]